Myanmar has agreed to the appointment of H.E. Mr. Demetrios A. Theophylactou as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Cyprus to the Republic of the Union of Myanmar with residence in New Delhi – Ministry of Foreign Affairs
The Government of the Republic of the Union of Myanmar has agreed to the appointment of H.E. Mr. Demetrios A. Theophylactou as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Cyprus to the Republic of the Union of Myanmar with residence in New Delhi.
Mr. Demetrios A. Theophylactou was born in Nicosia, Cyprus on 11 May 1958. He received his Bachelor and Master Degrees majoring in Communication, Political Communication and Broadcast Journalism from Washington State University. In 1995, he got Ph.D degree in International Relations, Comparative Politics, Political Economy from Washington State University with dissertation on Security, Identity and Nation-Building. Asavisiting Professor, he also lectured and published widely on international relations and diplomacy. Starting from 1994, he served in various capacities at Permanent Mission of Cyprus to the UN in New York, High Commission of Cyprus to Australia in Canberra, Nicosia Ministry of Foreign Affairs and Permanent Representation of Cyprus to EU in Brussels. Currently, he is serving as the Ambassador of the Republic of Cyprus to India.
H.E. Mr. Demetrios A. Theophylactou will serve as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Cyprus to the Republic of the Union of Myanmar with residence in New Delhi.
နယူးဒေလီမြို့တွင် အခြေစိုက်သည့် ဆိုက်ပရပ်စ်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး မစ္စတာ ဒီမက်ထရီ အို့စ် အေ သီအိုဖီလက်တို အား ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ ဆိုက်ပရပ်စ် နိုင်ငံ၏ အထူးအာဏာကုန်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော သံအမတ်ကြီးအဖြစ် ပူးတဲွခန့်အပ်ရန် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရမှ သဘောတူပြီး ဖြစ်ပါသည်။
မစ္စတာ ဒီမက်ထရီအို့စ် အေ သီအိုဖီလက်တို အား ၁၉၅၈ ခုနှစ်၊ မေလ ၁၁ ရက်နေ့တွင် ဆိုက်ပရပ်စ်နိုင်ငံ၊ နီကိုရှာမြို့တွင် မွေးဖွားခဲ့ပါသည်။ ၎င်းသည် ဆက်သွယ်ရေး၊ နိုင်ငံရေးရာ ဆက်ဆံရေးနှင့် သတင်းထုတ်ပြန်ရေး အထူးပြုဖြင့် ဝိဇ္ဇာဘွဲ့နှင့် မဟာဘဲွ့တို့အား ဝါရှင်တန် ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်မှ ရရှိခဲ့သည်။ ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး၊ နိုင်ငံရေးရာ နှိုင်းယှဉ်လေ့လာရေး၊ နိုင်ငံရေးရာဘောဂဗေဒ ပါရဂူဘွဲ့အား လုံခြုံရေးအစီအမံများနှင့် ပြည့်စုံ သည့် နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေး အထူးပြုကျမ်းဖြင့် ဝါရှင်တန်ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်မှ ရရှိခဲ့သည်။ ဧည့်ပါမောက္ခအနေဖြင့် နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးနှင့် သံတမန်ရေးရာဘာသာရပ်များကို သင်ကြား ပို့ချခြင်း၊ စာအုပ်စာတမ်းရေးသားထုတ်ဝေခြင်းများကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဆောင်ရွက်ခဲ့သူ ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းသည် ၁၉၉၄ ခုနှစ်မှ စတင်ကာ နယူးယောက်မြို့ရှိ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ ဆိုက်ပရပ်စ်အမြဲတမ်းအဖဲွ့ရုံး၊ ဩစတြေးလျနိုင်ငံ၊ ကင်ဘာရာမြို့ရှိ ဆိုက်ပရပ်စ် မဟာမင်းကြီး ရုံး၊ နီကိုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဘရပ်ဆဲလ်မြို့ရှိ ဥရောပသမဂ္ဂဆိုင်ရာ ဆိုက်ပရပ်စ် နိုင်ငံ အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖဲွ့ရုံးတို့တွင် ရာထူးတာဝန်အသီးသီးဖြင့် တာဝန်ထမ်းဆောင် ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဆိုက်ပရပ်စ် သံအမတ်ကြီးအဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်လျက်ရှိပါသည်။
နယူးဒေလီမြို့အခြေစိုက်သည့် ဆိုက်ပရပ်စ်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး မစ္စတာ ဒီမက်ထရီအို့စ် အေ သီအိုဖီလက်တို သည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ ဆိုက်ပရပ်စ်နိုင်ငံ၏ အထူးအာဏာကုန်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော သံအမတ်ကြီးအဖြစ် ပူးတွဲတာဝန် ထမ်းဆောင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၅ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၄ ရက်။